नेपाली युवाको बाध्यता”चालीस कटेसी रमाउँला” - hamro Desh
हालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर भाइरल भयो ।त्यो तस्वीर थियो खाडीमा काम गर्ने एक युवा डेविड लामाले पोष्ट गरेको तस्वीर ।जसमा उनी आफै तातो खुल्ला सडकमा अण्डा बनाइरहेका छन र स्टाटस लेखेका छ्न,”चालीस कटेसी रमाउँला । ” जुन केही समय अघि निकै लोकप्रिय गीतको लाईन हो ।
खाडीमा काम गर्ने पुरुषले पचास डिग्रीको तापक्रमले तातिएको खुला सडकमा अण्डा बनाईरहेको दृश्य हेर्दा त आश्चर्यलाग्दो र रमाइलो लाग्ला तर त्यो भोग्नेलाई रमाईलो छैन । नेपालमा रोजगारीको पर्याप्त अवसरको सिर्जना हुन नसक्दा कलिलो उमेरमा नै नेपाली युवायुवती खाडी मुलुकमा रोजगारीको लागि जान बाध्य भएको अवस्थालाई त्यो तस्वीरले प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
राजाकै शासन काल उत्तम थियो !
आईजीपी साप तपाईका प्रहरीको मुल्य ५० रुपैयाँ मात्र हो ?
नेपाल आईडल बन्द गर अन्यथा जातीए द्वन्द हुन बेर लाग्दैन
रञ्जुु दर्शना भन्छिन्- ‘माग्दिन म माफी ऋषिपञ्चमी पूजामा’, धन्यवाद ! मलाई महिनावारी भएको बेला, कष्ट सहने शक्ति दिएकोमा